कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज
कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७८ वैशाख ३० गते, ०९:०६ मा प्रकाशित
उनी बुधबार राति ८ बजे अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।
कोरोना संक्रमित भएपछि १९ दिनअघि शाह पूर्वरानी कोमल शाह र छोरी प्रेरणा शाहसँगै अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
अस्पतालमा उपचाररत पूर्व महारानी कोमल शाहको अवस्था भने सुधारोन्मुख छ । स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै उनलाई दिइने अक्सिजनको मात्रा लगातार घटाउँदै उपचारलाई जारी राखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
उनलाई केही दिनअघि स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भएपछि आईसीयुबाट वार्डमा सारिएको थियो । उनको उपचार प्लाज्मा थेरापी विधिबाट समेत गरिएको थियो ।
पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ आएपनि उनी आमासँग अस्पतालमै छन् ।
पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपचारमा नर्भिक अस्पतालका सिनियर फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्ट डा. जेपी जैसवाल र चेस्ट फिजिसियन डा. बी श्रीवास्तव नेतृत्वको टिम संलग्न थियो । नर्भिकको टिमलाई पूर्व राजपरिवारका निजी चिकित्सकले पनि सहयोग गरेको थियो ।